E-News Nepali || Fast and Accuracy » अष्ट्रेलियाको मार्मिक दृष्यः जलेकी घाइते आमाको शल्यक्रिया गर्दा बच्चाले.
अष्ट्रेलियाको मार्मिक दृष्यः जलेकी घाइते आमाको शल्यक्रिया गर्दा बच्चाले.
अष्ट्रेलियामा फैलिएको आगोका कारण करिब ५० करोड जनावरले ज्या न गुमाएका छन् भने लाखौँ घा इते छन्। आगोमा परेका लाखौँ जीव जन्तुलाई उद्धार गरिएको छ भने घाइते जनावरको उपचार पनि गरिएको छ। यसै क्रममा एक घाइते कोआला (अष्ट्रेलियामा पाइने जनावर) र उसको बच्चाको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।
उक्त तस्वीरमा कोआलाको बच्चाले आफ्नी आमाको उपचारको पूरै समय आमासँगै टाँसिएको छ। यही हो मासँग बच्चाको प्रेम भन्दै कयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समाचार बनाएका छन्। अस्ष्ट्रेलियाको जीव संरक्षणले आमाको नाम लिजी र बच्चाको नाम फेन्टम राखेको छ।
पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी बच्चाको आमासँग र आमाको बच्चासँग माया हुने गर्दछ। जहाँ एकतर्फ अस्ष्ट्रेलियाको आगोको भयानक तस्वीर सार्वजनिक भएका छन् भने अर्को तर्फ राहत दिनेवाला तस्वीर पनि सार्वजनिक भएका छन्।
जहाँ जनावरको अस्पतालमा कोआलाको बच्चाले आमाको उपचारका क्रममा उसलाई एकछिन पनि छोडेन्। डाक्टरले बच्चालाई आमासँग अलग बचाउने धेरै प्रयास गरे। तर बच्चाले आमालाई छोड्न मानेन्। दुई हप्ता पहिले अष्ट्रेलियामा फैलिएको आगोबाट बच्न कोआला भाग्दै गर्दा सडकमा कारसँग ठोक्किएको थियो। उ आगोले थोरै जलेको तर उसले आफ्नो बच्चालाई केही हुन दिएन्। कारसँग ठोक्किएपछि दुबैलाई अष्ट्रेलियाको जू वाइल्डलाइफ अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्याइयो।
प्रकाशित मिति २२ पुष २०७६, मंगलवार १२:१२